Gaalkacyo oo dagaal looga cabsi qabo - Wargeyska Faafiye
Maamul goboleedka Puntland ayaa ciidamo fara Badan waxaa ay soo dhoobeen Xadka Kala qeeybiya Maamulada Gal-mudug iyo Puntland, sida aan wararka ku helayno.
Ciidamadan oo ku hubeysan gaadiidka dagaalka ayey wararku sheegayaan iney xalay gaaf wareegayeen xaafada Horumar ee kala qeybisa woqooyiga iyo koonfurta Gaalkacyo iyagoo dadka ku amrayey iney guryaha galaan.
Saraakiisha maamulka Puntland ayaa sheegay in ciidamadan ay xaqiijin doonaan amaanka magaalada Gaalkacyo iyo garoonkeeda dayuuradaha, ujeedada halkaas loo geeyeyna aysan aheyn colaad iyo duulaan.
Goobjoogayaa ku sugan Gaalkacyo ayaa waxaa ay sheegeen in Garoonka diyaaradaha Magaalada Gaakacyo ee Xarunta Gobolka dagin Diyaaradaha Rakaabka ah ee Maalin walbo kasoo dagi jiray Garoonkaasi.
Talaabadan ayaa ku soo soo aadeysa xili labada maamul ee Puntland iyo Galmudug uu soo kala dhex galay khilaaf ku saabsan garoon dayuuradeed oo Galmudug ay ka sameystay degaano koonfur ka xiga Gaalkacyo, kaasoo ay hawada ka xirtay Puntland.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsCiidamada asluubta Soomaaliya oo u dabbaal-degay aas-aaskooda.Vandal paints penis on £1.5million Bugatti VeyronSomaali Ku dhimatay bada cas iyagoo tahriibaya .Sharci darro lagu tilmaamay lacagaha laga qaado gaadiidkaAskar fara badan oo lagu dilay dagaal ka dhacay Jubbada Hoose